Iindaba -IiHoodies zithandwa kwihlabathi liphela
IiHoodies zithandwa kwihlabathi liphela
I-hooded pullover sisambatho esisebenzisayo esivela kwiminyaka ye-1930 e-US yabasebenzi kwiindawo zokugcina ezibandayo zaseNew York. I-hoodie yangena ekusebenziseni okuthandwayo kwii-1990s.
I-hoodie yathandwa kwii-1970s, zininzi izinto ezinegalelo kwimpumelelo yayo. Inkcubeko ye-Hip hop ephuculwe kwisiXeko saseNew York ngeli xesha kwaye nefashoni ephezulu nayo yaqala ngeli xesha, njengoko uNorma Kamali nabanye abayili abaphambili bamkela kwaye bayenza yanxiba impahla entsha. Ukunyuka kwee-hoodies kunye neelogo zaseyunivesithi kwaqala ngeli xesha.
Ngama-1990s, i-hoodie yavela yaba luphawu lokwahlulwa, isitatimende somoya wezemfundo, kunye nokuqokelelwa kwefashoni okuninzi. , abadla ngokuba ngabadlali be skateboarders okanye abatyibilika emanzini, badlala i-hoodie kwaye basasaza imeko ngapha kwintshona ye-United States, ikakhulu eCalifornia. ingqokelela yabo kwiminyaka yoo-1990.
IiHoodies ziye zaba yeyona nto iphambili e-US, ezigqitha kwinjongo yokuqala yento yokunxiba, efana nejean. Le nto yokunxiba ifumene indlela eya kwizitayile ezahlukeneyo, kude kube ngoku ukuba inxitywe phantsi kwebhatyi yesuti. i-hoodie. Kuyo yonke i-US, kuqhelekile ukuba ulutsha kunye nabantu abadala abancinci banxibe i-sweatshirts-enee-hood okanye ezingenazo-ezibonisa amagama abo esikolo okanye i-mascots esifubeni, nokuba yinxalenye yunifomu okanye ukhetho lomntu.